Kuduraa nyaata manduubee Washington dhihaa
Qajeelchii kuni nyata fayya si’i fi matii ketiifi biquliisitu si garigaraa. Akkam akka gotu baradhuu: nyaata manduubeefi iddo hundarra caalu filuu, biyyee manduubee biqiltuufi qopheessuu; yeroo biqiltuufi hundarra caalu filachoo; yeroo dheraafi biqilisisuu; makara guddaa; manduubee waga hunida; makara kee kaa’uu fi qoodu. Barreeffama ingilizi keessatti qabaa.
Tarkaanfii shan laffa uumama itin eeggannoo
Karaa shan laffa kee akkataa miidhaan maatii keeti fi naannoo kee irra hingeenyen itti eeggiduu. Ittidabalatee biyye fayya akkamiti akka ijaartuu, bishaan gaha obafitu fi akkamit qoricha biqiltuu barbadeessan fayaadamu ittisuu.
Qajeelcha faayyaa mana kessa
Garrii tokko hiruu kanna odeffannon qabuu akkamiti oomisha mana kessati fayyadaminu karra nagayaa ta’en ijecha itti manixafamee laluudhani akka adda foyuu danidenuu, karra nagayaatin akkamiti oomisha mana keessa hamaa ta’ani gatuu danidenuu fi ajaja warra koitti baha ilbiisootaa irra hir’isuu danidetuu qabaa. Garrii birra imoo dura deemaa karra nagayanii hojja qulqulleesu jaha fi ajaja karra nagayatin dibuudha.